Qabiil Latin Amerika OO vuris cusub lagu arkay waa,……… | Raadgoob
Waxaa jirta jirta jufo ka tirsan qoowmiyadda Warao oo aanan lahayn wax rag ah. Inta badan raggii qaangaarka ahaa waa ay wada dhinteen, dumarka hadda noolna waa kuwa la yaso oo aanan la guursanin, waxaana la rumeysanyahay in ay qabaan sixir xun oo aafo ah.
Ragga beesha oo ku nool bariga dalka Venezuela ee Latin America ayaa dhammaantood waxa geeriyooday, waxaana la ogaaday in ay u dhinteen cudurka HIV Aids sida uu sheegay Dr Jacobus de Waard.
Image caption Wabiga Orinoco ayaa qeyb weyn ka qaata nolosha beesha Warao
Inkasta oo tirada dadka qaba cudurkan dalka Venezuela ay yaryihiin, haddane bulshooyinka tiradooda aadka u yartahay, dadka cudurkan qaba waxa ay noqotay xad aad u badan oo gabi ahaantoodba dabar goyn kara.
Illaa 50 kun oo qof ayaa lagu qiyaasaa bulshadan in ay dhanyihiin , waxaana la sheegay in cudurkan lagu talaalay dadkan, uusana ahaan jirin cudur ku dhaca dadka dhalladka ah ama qaaradda America loogu tagay sida ay sheegtay Flor Pujol oo madax ka ah sheeybaarka mac-hadka cilmi-baarista seeyniska Venezuela.
Geeri deg deg ah
Nooca viruska HIV ee qabiilkan galay ayaa ah mid la layaab leh, waa mid markiiba isu rogaya cudurka Aids-ka, wuxuuna qofka u horseedayaa in uu markiiba dhinto.
Caadi ahaa qofka marka uu qaado virus-ka HIV, waxa uu noolaadaa muddo dheer, durbana ma qaado cudurka Aids-ka.
Boqolkiiba 90% dadka qabiilkan waxaa ku dhacay cudurkan, wuxuuna qofka noolaan karaa muddo 2 sano ah kaliya.
Nooca cudurka ay qabaan reerkan ma ahan mid adduunyada inteeda kale lagu arkay, mana la garanayo halka uu ka yimid, balse Dr De Waard waxa uu qabaa in doomaha isticmaala wabiga halkaas ku yaala oo qaarkood ay ka yimaadaan dalka Philippines in laga yaabo in lagu keenay cudurka.
Astaamaha layaabka leh ee uu cudurkani leeyahay ayaa ah in uu inta badan haleelo ragga in ka badan inta uu dumarka haleelo.
Arrintan waxaa ugu wacan ayaa la leeyahay in dadka labeebka ah ay ku badanyihiin qowmiyadan, kuwaas oo ragga kale ay u galmoodaan, loona aaminsanyahay in ay yihiin ‘xaaska labaad’.
n Cudurka ayaa waxa uu inta badan ku dhacaa ragga reer Warao
Arrin kale oo la ogaaday ayaa ah in cudurka qaaxada uu qabiilkan aad ugu badanyahay, kaas oo ka dhigaya kuwa aad ugu nugul virus-ka HIV-ga.
Waxaa dhibka kusii kordhinaya ayaa ah dawo la’aanta baahsan ee ka jirta dalka Venezuela.
Regina Lopez oo ah agaasima hay’adda UNAIDS ee Venezuela ayaa sheegtay in uu gabaabsi weyn ka jiro dawada lagula tacaalo HIV-ga, iyada oo markii ugu dambeysay ee dowladda dalkaas ay dawadaas soo gadato ay ahayd bishii Janaayo, 2017-kii.
Waxa ay intaas ku dartay in uu jiro qorshe gaar ah oo ku saabsan beesha Warao, waxaana ka mid ah wacyigalin si loo badalo fikirka ay adduunka ka qabaan.
Waxa ay qabiilkan aaminsanyihiin in halista ay jirka kasoo gasho afka oo kaliya.
Lahaanshaha sawirka Photo courtesy of Jacobus de Waard
Image caption Qof qabiilka Warao ka tirsan oo tijaabo laga qaadayo
Dhibka kale ee dadka heysta ayaa ah in meesha ay ku noolyihiin qaabka kaliya ee lagu tagi karo ay tahay doon 8 saacadood kugu geyn karta.
Dhaqaatiirta waxa ay ka digayaan in qabiilka uu dabar go’i doono mardhow, raggana ay aad usii yaraadeen.